संक्रमित नभएका मुस्ताङ र हुम्लामा कसरी हुँदैछ कोरोना रोकथामको काम? :: विवेक राई :: Setopati
संक्रमित नभएका मुस्ताङ र हुम्लामा कसरी हुँदैछ कोरोना रोकथामको काम?
मुस्ताङकी प्रजिअ पौडेल र हुम्लाका प्रजिअ गिरी। फाइल तस्बिर।
अहिले सिंगो देश नै कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। दुई हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र हुम्ला भने एक जना पनि कोरोना संक्रमित छैनन्।
यसरी लामो समयदेखि शून्य संक्रमित जिल्लाको सूचीमा परेकाले अहिले यी दुई जिल्लाको ध्यान कसरी संक्रमण भित्रिन नदिने भन्नेमा छ।
गृह मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को जिम्मेवारीमा हिरादेवी पौडेललाई मुस्ताङ पठाएको छ।
'म आएको १० दिनमात्र भएको छ। यहाँको धेरै वस्तुस्थिति बुझ्न बाँकी छ,' प्रजिअ पौडेलले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'तर मैले पहिल्यै यहाँ शून्य संक्रमित छन् भन्ने सुनेको थिएँ। अब पनि सकेसम्म जिल्लामा संक्रमण भित्रन नदिने गरी काम गर्छौं।'
अहिलेसम्म मुस्ताङमा एक जना ८३ वर्षीया वृद्धामा संक्रमण देखिएको थियो। १६ दिनको उपचारपछि उनी पनि निको भइन्। त्यसपछि भने एकजनालाई पनि संक्रमण देखिएको छैन।
जिल्लामा संक्रमण नभित्रिनुमा सडक अवरुद्ध भएको कारणले पनि हुनसक्ने पौडेलको बुझाइ छ। झन्डै ३४ दिन मुस्ताङ आउने सडक बन्द भएको भन्दै त्यसले बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई रोकेको उनी बताउँछन्।
'एक महिना बढी बाटो बन्द भयो। बाहिरबाट मानिसहरूको आवतजावत हुन पाएन। त्यसले गर्दा पनि संक्रमण नभित्रिएको हुनसक्छ,' उनले भनिन्।
मुस्ताङ जोड्ने बेनी-जोमसोम सडक तीन दिनदेखि सञ्चालनमा आएको छ। योसँगै अब बाहिरबाट जिल्ला प्रवेश गर्नेहरूको चाप बढ्छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सोहीअनुसार संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न कदम चालेको छ।
प्रजिअ पौडेल भन्छिन्, ' सडक सञ्चालन भएपछि चुनौती थपियो। हिजोसम्म बाहिरको आगमन ठप्प थियो। तर अब त मानिसहरूको आवतजावत हुन्छ। त्यसैले हामीले नाकामा कडाइ गरिरहेका छौं।'
मुस्ताङ जोड्ने घाटा नाकामा हेल्थ डेस्क राखिएको छ। अहिले बाहिरी जिल्लाबाट आउने मानिसहरूको स्वास्थ्य जाँच देखि सम्पूर्ण विवरण लिने काम घाटामा गरिन्छ।
टा आइपुगेका व्यक्तिहरूको विवरण लिएर प्रहरीले सम्बन्धित वडामा खबर गरिदिन्छन्। त्यसपछि वडाले उताबाट क्वारेन्टिनमा राख्ने खबर गरेपछि मात्र मानिसहरूलाई प्रवेश गर्न दिइने प्रजिअ पौडेलले बताइन्। 'हामीले खाद्यान्न लिएर आउने चालक र सहचालकलाई पनि गाडीबाहिर ननिस्कन भनेका छौं। बुरू सम्बन्धित पसलका धनीहरूलाई आफैं सामान लोड-अनलोड गर्न र चालक र सहचालकलाई खाना गाडीभित्रै दिन भनेका छौं,' उनले भनिन्।
शून्य संक्रमित भए पनि जिल्लामा उल्लेख्य परीक्षण भने हुन सकेको छैन। जिल्लामा अहिलेसम्म जम्मा ७५ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण कम भएका कारण पनि संक्रमित नभेटिएको हुनसक्छ।
परीक्षणलाई बढाउनेबारे जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसी) मा छलफल भइरहेको प्रजिअ अधिकारीले बताइन्।
'सुरूमा आरडिटी परीक्षण गर्दा केहीलाई पोजेटिभ देखिएको रैछ। पछि पिसिआर गर्नुपर्छ भनेर केहीको पिसिआर गर्दा एकजना वृद्धामा संक्रमण देखिएछ। ७५ जनाको परीक्षण गर्दा अहिले कसैलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको छैन,' उनले भनिन्, 'सायद परीक्षण कम भएर पनि संक्रमण नदेखिएको हुनसक्छ। अब झन् नाकाबाट पनि आवतजावत बढ्न थालेको छ। त्यसैले परीक्षणलाई बढाउने बारे छलफल गर्दैछौं।'
उनले तत्काल स्वाब लिने जनशक्तिको अभाव रहेकाले त्यसको पनि व्यवस्थापनमा जुटेको बताइन्। संक्रमण भित्रिए र संख्याको आकार पनि बढ्न थाले पूर्वाधारको हिसाबले मुस्ताङ कमजोर छ। संक्रमण देखिन थाले यहाँ संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ।
अहिले जिल्ला अस्पतालमा ८ र लेटेमा ४ गरी मुस्ताङभरि १२ वटा आइसोलेसन बेड छन्। त्यस्तै क्वारेन्टिन पनि जम्मा १ सय १२ बेड क्षमताका छन्।
आइसियू र भेन्टिलेटरको सुविधा जिल्लामै छैन।
'भोलि संक्रमित देखा पर्न थाले र कसैलाई आइसियूमा भर्ना गर्नुपरे कि त बाग्लुङस्थित धौलागिरी अस्पताल नभए पोखरा नै पुर्याउनुपर्छ,' पौडेलले भनिन्, 'त्यसैले भोलि लड्ने भन्दा पनि अहिल्यै कसरी संक्रमण भित्रिन नदिने भन्नेमा केन्द्रित छौं।'
उता हुम्लामा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका एकजना पनि संक्रमित भेटिएका छैनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी गिरी भन्छन्, 'हुम्ला ठेगाना भएका केहीलाई देखिएको थियो। तर यहीँ बस्दै आएकाहरूलाई भने कसैलाई पनि संक्रमण देखिएको छैन।'
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म हुम्लामा २३ सय बढी मानिसको परीक्षण गर्दा सबैको कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ। एक साताअघि मात्र १ सय २८ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएकोमा सबैको नगेटिभ आएको प्रजिअ गिरीले बताए।
'हामीले बेलाबेला सरकारी कार्यालय र मानिसहरूको भीडभाड हुने क्षेत्रबाट स्याम्पल लिएर परीक्षण गरिरहेका छौं। तर अहिलेसम्म संक्रमण देखिएको छैन,' उनले भने।
हवाई मार्गबाटै बढी मानिसको आवत जावत हुने हुम्लामा संक्रमण भित्रिन नदिन यात्रुहरूलाई ७२ घन्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ।
गिरी भन्छन्, '७२ घन्टाभित्रको पिसिआर नेगेटिभ आएका यात्रुमात्र हवाई मार्गबाट प्रवेश गर्न पाउँछन्।'
उनले बाजुरा र मुगुबाट प्रवेश गर्ने नाकामा पनि हेल्थ डेस्कसहित प्रहरी खटाइएको जनाए। पछिल्लो समय बाटो बिग्रिएकाले ती नाकामा मानिसहरूको आवतजवात बन्द छ।
संक्रमण भित्रिहाले त्यसको लागि पूर्वाधारलगायत तयारी पनि भइरहेको गिरीले बताए। 'पहिले सबै पालिकामा गरेर १ सय ३६ बेडको क्वारेन्टिन थियो तर अहिले छैन। अबचाहिँ धेरै बनाउने भन्दा पनि एउटा बनाउने तर व्यवस्थित बनाउने भन्ने हो,' उनले भने।
जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको १० बेडको आइसोलेसन बनाउने तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए। भेन्टिलेटर जडान गर्ने काम भइरहेकाले केही दिनमै त्यो तयार हुने गिरीले बताए।
अहिले शून्य संक्रमित रहे पनि संक्रमण भित्रिने वा फैलिने जोखिम सदैव रहने भन्दै त्यसका लागि तयारी हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'संक्रमण जतिबेला पनि देखिनसक्छ। त्यही भएर हामीले भीडभाड हुने ठाउँहरूमा कम्तिमा एकएक महिनामा नमूना परीक्षण गर्ने भनेका छौं,' प्रजिअ गिरीले भने, 'अर्को मुख्य चुनौती भनेको आवतजवात नै हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ कडाइ गर्ने नीतिअनुसार काम गरिरहेका छौं।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १०, २०७७, ०५:५०:००